Garoonka oo hadda ah saldhig ay deggen yihiin ciidamada Midowga Afrika ayaa wax dayactir ah lagu sameyn tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-kii, waxaana dhowr jeer oo hore saldhigyo ka dhigtay ciidammo kala duwan.
"Waxaan weydiisannay ciidamada Midowga Afrika inay ka guuraan garoonkaas si dib loogu billlaabo ciyaaraha kubadda cagta," ayuu yiri xoghayaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Cagta C/qani Saciid Carab oo saxaafadda la hadlay.
Siciid Carab wuxuu sheegay in isaga iyo xubno ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ay booqdeen garoonka, ayna ku arkeen ciidammo fara badan oo ka tirsan kuwa AMISOM oo saldhig uu u yahay.
Dalabka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo ay inta badan Muqdisho tahay goob xasilloon, waxaase garoonka oo ay dowladda Shiinuhu dhistay sannadihii toddobaadyadii uu weli saldhig weyn u yahay ciidamada AMISOM.
Ma jiro hadal kasoo baxay dhinaca ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, kaasoo ay kaga jawaabayaan dalabka kaga yimid xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo noqonaya kii ugu horreeyay ee loo jeediyo ciidamadan.
Xarakada Al-shabaab ayuu saldhig u ahaa garoonka ka hor intii aysan ciidamada AMISOM la wareegin dabayaaqadii sannadkii hore, markaasoo Al-shabaab ay isaga baxday inta badan magaalada Muqdisho oo ay ka talinaysay.
10/19/2012 4:51 AM EST